China ZBW (XWB) Series AC Box-Subdị Substation Manufacturer and Supplier | Xinneng
Boxdị ụdị igbe AC
ZBW (XWB) AC igbe-ụdị substation nwere àgwà nke ike zuru ezu set, obere size, kọmpat Ọdịdị, mma na a pụrụ ịdabere na ọrụ, adaba mmezi, na agagharị. E jiri ya tụnyere ihe ngosi obodo, ụdị ụdị igbe nke otu ikike ahụ nwere ebe ọ na-abụkarị naanị 1 / 10-1 / 5 nke eriri a na-eme eme, nke na-ebelata oke arụ ọrụ na olu ihe owuwu, ma belata ụgwọ ọrụ ahụ. usoro nkesa, enwere ike iji ya na sistemụ nkesa ike na ntanetị, yana enwere ike iji ya na ntanetị ọkụ ma ọ bụ nkesa nkesa ọkụ. Ọ bụ ụdị nke akụrụngwa ọhụrụ maka owuwu na mgbanwe nke okpuru obodo na ime obodo.
Usoro ZBW (XWB) nke ụdị igbe dị iche iche na-ezute ụkpụrụ nke SD320-1992 "Ọnọdụ teknụzụ ụdị ụdị igbe" na GB / T17467-1997 "Ngwunye ọkụ eletrik dị elu / obere ọkụ eletrik".
Ihe Nlereanya na Ihe Ọ Pụtara
1. Ogologo adịghị gafere 1000m.
2. Igwe okpomọkụ kachasị elu anaghị agafe +40℃, nke kachasị dị ala karịa -25℃, na nkezi okpomọkụ n'ime oge 24 anaghị agafe + 35℃.
3. windgba ọsọ ikuku anaghị esi karịa 35m / s.
4. Igwe ikuku ikuku nke ikuku anaghị agafe 90% (+25℃).
5. Mgbatị ọsọ nke ala ọma jijiji abụghị ihe karịrị 0.4m / s2, na osimiri ahụ adịghị elu karịa 0.2m / s2.
6. Enweghị ebe ọkụ, ihe ọghọm mgbawa, mmetọ dị egwu, mmebi kemịkal na oke ịma jijiji.
Mara: Ọnọdụ ojiji pụrụ iche, soro ụlọ ọrụ anyị kparịta ụka mgbe ị na-enye iwu.
Isi Nka na ụzụ
Ngwa eletriki eletrik
Ngwa eletrik dị ala
Gosiri voltaji Ue
Gosiri ikike Se
Typedị anyị ： 200-1250
Ntụtụ pin ： 50-400
Gosiri ugbu a Ie
Gosiri na-agbasa ugbu a
Ibu Ibu mgba ọkụ 400-630A
Ngwakọta ngwa ọrụ dabere na fuuz
Gosiri oge dị mkpirikpi iguzogide ugbu a
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu na-egbochi ugbu a
Ike ugboro guzogide volta min Imin）
N'ihe gbasara ala na 30 30
agba: 35 / 5min
Mwepu nkewaji 48、34
Akọrọ: 28 / 5min
N'ihe gbasara ala na oge 75 60
Mwepu nkewapụ 85、75
agba ： ＜ 55
Akọrọ ： ＜ 65
Biko nye ozi ndị a mgbe ị na-enye iwu:
1. -dị ụdị ụdị igbe;
2. formdị ngbanwe na ike;
3. High na ala voltaji circuit isi wiring atụmatụ;
4. Moddị na oke nke akụkụ eletriki nwere ihe pụrụ iche chọrọ;
5. Agba shei;
6 Biko nye ozi ndị a mgbe ị na-enye iwu：
6. Aha, oke na ihe ndi ozo choro nke a mahia. Aha, oke na ihe ndi ozo choro.
Nke gara aga: Cummins Generator usoro
Osote: GGD AC Igwe Voltage Ike Nkesa
Nkesa Box Cabinet
Oem Nkesa Cabinet